Inyunyana isabisa ngokuveza amahlazo kowezokuvikela | Bayede News
Home/ Izindaba/Inyunyana isabisa ngokuveza amahlazo kowezokuvikela
LUYA ngokushuba udaba lokuxoshwa kwamasosha angama35 abeqeqeshelwa ubudokotela eCuba njengoba inyunyana iSouth African National Defence Union (Sandu) isisabise ngokuthi izoveza amahlazo ngokwenziwa izikhulu zombutho wezokuvikela kula masosha nokungalandelwa komthetho okugcine kuholele ekutheni ashiye phansi ukufunda.
Ngasekuqaleni kwenyanga iziphathimandla zombutho wezokuvikela zimemezele ukuthi zixoshe la masosha emuva kokuba kuphele izinsuku ezingama30 engalubhadi emakilasini engabiki nokuthi kuqhubekani. UNobhala jikelele weSandu uMnu uPikkie Greef uthe njengoba bethathela umbutho wezokuvikela izinyathelo zomthetho kuzoqhuma nhlamvana uma lolu daba selusenkantolo.
“Okokuqala lama lungu ethu abefundiswa esikhungweni esingekho emthethweni futhi esingekho ngaphansi kwenyuvesi njengoba batshelwa ekuqaleni. Abakaze babhalise eNyuvesi yaseCuba futhi babengabhalisile njengabafundi abenza izifundo zobudokotela njengoba kusho umgomo wezempilo wakuleli,” kusho uGreef
Uthi isono sabo ukubuza ukuthi isikhungo ababhalise ngaphansi kwaso sisemthethweni yini. Eqhuba uthe ngesikhathi lama sosha eseCuba kuningi okwenzekile okuphembene nomthetho futhi okuwukuhlukumeza amalungelo.
“Sitholile ukuthi kuningi abebesatshiswa ngakho yizikhulu zakuleli, kodwa okuningi kuzovela ecaleni ngoba kuningi okwenzekile okuwukuhlukumeza amalungelo abantu. Kumele bachaze ukuthi kungani bephatha abantu bakuleli ngale ndlela,” kuqhuba uGreef.
Uthi kuningi okunye njngokuthi amasosha abesatshiswa nangokuningi kuhlanganisa nokufa uma engayithobeli imithetho yombutho wezokuvikela.
Uveze nokuthi babesatshiswa ngokuthi uma bengenilisekile ngendlela abaphethwe ngayo eCuba ababambe ibhanoyi babuyele eNingizimu Afrika.
“Uma bengababuyiseli emsebenzini sizofaka isicelo esiphuthumayo enkantolo sibavalele ekhoneni abombutho wezokuvikela kuleli ngemithetho yabo nohlaka lokuziphatha abahlulekayo ukululandela”.
Okhulumela iSANDF uBrigadier uMafi Mgobhozi uthe azilime ziye etsheni uma befuna ukubafaka enkantolo abaqhubeke nalokho nabo bazozivikela khona. “Okokuqala kumele bakhumbule ukuthi bangamasosha ngaphambi kokuba izitshudeni ezifundela ubudokotela ngakho baphethwe imithetho yombutho wezokuvikelwa kwezwe,” kuchaza uBrigadier uMgobhozi.
Uthe akulona iqiniso ukuthi isikhungo ababeqeqeshwa kuso asibhalisile ngokusemthethweni ngoba ngokwazi kwabo singaphansi kweNyuvesi yaseCuba, futhi nabo babebhalisile ngaphansi kohlelo lwezempilo. UBrigadier uMgobhozi uveze nokuthi bonke laba bafundi abaxoshwa ngabenza unyaka wokuqala, kukhona abafundi abangaphambili kwabo abenza unyaka wesithathu nowesine abangenazinkinga.
“Kubuhlungu ukuthi umuntu aye kubantu asho into ayaziyo ukuthi ayilona iqiniso. Bakwazi kahle ukuthi njengamalungu eSANDF kuneminyango okudluliswa kuyo izikhalo uma zikhona. Uma ungayi ekilasini kuze kuphele izinsuku ezingama30 usuke usuzixoshe wena, ngoba kuyacaca ukuthi awusafuni ukusebenzela iSANDF”.
Uthe abameli babo bayitholile incwadi yenyunyana ebanqumela ugwayi katiki bayayicubungula. Selokhu kuvele lolu daba uNgqongqoshe Wezokuvikela uNkk uNosiviwe MapisaNqakula akathi vu ngalo.
IMeya nezinhlelo zentuthuko kuMasipala iBig 5 Hlabisa